कहिले गर्लान् अालिया र रणवीरले विवाह? | Suvadin !
कहिले गर्लान् अालिया र रणवीरले विवाह?
फिल्म ब्रम्हास्त्रबाट बाधिएको अालिया र रणवीरको जोडी यतिबेला फिल्म सुटिङको क्रममा अमेरिकाबाट बुल्गेरिया पुगेका छन्। उनीहरूको विवाहको हल्ला फैलिरहेको बेला दुवैले अाफु प्रेममा रहेको स्वीकारेका छन् र २०२० सम्म विवाह नगर्ने योजनामा रहेको बताएका छन्। विवाह पश्चात फिल्म खेल्नी कि नखेल्नी सन्दर्भमा अालियाले विवाह पछि कामलार्इ नछोड्ने बताउदै उनले अाफुले सकुन्जेल कामलार्इ निरन्तरता दिने बताइन।
Aug 08, 2018 14:46
काठमाडाैं, २३ साउन – बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र निक जोनसको विवाहको चर्चा भइरहँदा हाल अभिनेत्री अालिया भट्ट र रणवीर कपुरको विवाहको खबरले बलिउडमा उत्तिकै चर्चा पाएको छ।
फिल्म ब्रम्हास्त्रबाट बाधिएको अालिया र रणवीरको जोडी यतिबेला फिल्म सुटिङको क्रममा अमेरिकाबाट बुल्गेरिया पुगेका छन्। उनीहरूको विवाहको हल्ला फैलिरहेको बेला दुवैले अाफु प्रेममा रहेको स्वीकारेका छन् र २०२० सम्म विवाह नगर्ने योजनामा रहेको बताएका छन्।
विवाह पश्चात फिल्म खेल्नी कि नखेल्नी सन्दर्भमा अालियाले विवाह पछि कामलार्इ नछोड्ने बताउदै उनले अाफुले सकुन्जेल कामलार्इ निरन्तरता दिने बताइन।